Office for Mac waa la cusbooneysiiyay si loogu daro taageero buuxda xisaabaadka iCloud iyo Yahoo | Waxaan ka socdaa mac
Office for Mac waa la cusbooneysiiyay si loogu daro taageero buuxda xisaabaadka iCloud iyo Yahoo
In kasta oo Yahoo joojiyay inuu noqdo shirkadda weyn ee internet-ka haddana waxay noqotay sanado badan kahor 2000, kadib markii loo iibiyey Verizon sanadkii 2018, haddana shirkaddu waxay sii waddaa inay bixiso adeegyo badan sida boostada. Yahoo, sida Gmail iyo Outlook, waxay bixiyaan oo keliya emayl, laakiin sidoo kale la xiriir iyo iskudubarid jadwalka, sida iCloud.
Si kastaba ha noqotee, Muuqaalka barnaamijka Mac, kaliya la siiyay helitaanka Yahoo! iyo xisaabaadka emaylka ee iCloud maahan dhamaan barnaamijyadeeda, sida xiriirada iyo kalandarka Laakiin cusbooneysiinta soo socota, Outlook ee maareeyaha emailka Mac wuxuu ugu dambeyn ku bixin doonaa taageero buuxda oo loogu talagalay xisaabaadka iCloud iyo Yahoo.
Laga soo bilaabo bilowgii istiraatiijiyaddeennu waxay ahayd inaan dhisno khibrad Muuqaal aan caadi ahayn oo ku saleysan jawaab celin toos ah oo idinka, isticmaaleyaasheena. Waxaan si dhow isha ugu haynay waxay leeyihiin, tan iyo bishii Sebtember, waxaan ku darnay in ka badan 50 ka mid ah astaamaha ugu badan ee laga codsaday muuqaalada cusub ee Mac, oo ay ku jiraan taageerada noocyada koontada ee dheeraadka ah, kor u qaadista amniga, iyo siyaabo badan oo dul saar waxyaalaha korkaaga. Jawaab celinta qiimaha badan ee aan helnay ayaa sidoo kale naga caawisay inaan hagaajino waxyaabaha mudnaanta leh
Kani maahan wararka kaliya ee Xafiiska uu kuhelay cusbooneysiintii ugu dambeysay, tan iyo markii erayga processor-ka ee Word isna uu helay a waayo-aragnimo ku-habboonaanta hadalka oo leh aalad cusub oo ereybixin ah oo lagu daro adeeggan oo lagu heli karo luqado badan
Qoraalka hadda waxaa lagu heli karaa luqado badan. Marka lagu daro luqado badan, ku hadla badan oo adduunka ka socda ayaa isticmaali kara muuqaalka hadalka-u-qoraalka. Qoraalka hadda wuxuu taageeraa toddobo luqadood oo cusub: Hindi, Ruush, Polish, Bortuqiis (Boortaqiis), Kuuriyaan, Thai, iyo Shiine (Taiwan).
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Office for Mac waa la cusbooneysiiyay si loogu daro taageero buuxda xisaabaadka iCloud iyo Yahoo
Haddana abaalmarin kale oo Apple TV ah +. Bangiga ayaa ku guuleystey Abaalmarinta Sawirka NAACP
Dalbo Apple Brazil, HomePod oo leh shaashad iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac